सबै भन्दा राम्रो के बश ड्रिल छ? सुविधाहरू, समीक्षा, उत्कृष्ट मोडेल को समीक्षा
राम्रो अभ्यास को मद्दतले तपाईं मात्र सतह मा प्वालहरू बनाउन सक्छ, तर पनि अन्य कार्यहरु गर्न। अप्रेंटिस, छनौट मोडेल को एक किसिम प्रस्तुत जो स्टोर, भ्रमण गर्न एकदम कठिन हुनेछ। तपाईं बश ड्रिल चयन गर्ने निर्णय भने, यो सार्वजनिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिने साधन निर्धारण गर्न आवश्यक छ। केही कलाकार, उदाहरणका लागि, हरेक दिन यस्तो उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्। जबकि अन्य समय समयमा यन्त्र प्रयोग। त्यो किन यो खातामा उपकरण को काम र कार्यक्षमता को अनुमानित रकम लिन त महत्त्वपूर्ण छ।
एक पेशेवर देखि घरेलू ड्रिल विपरीत
तपाईं आफूलाई लागि बश ड्रिल चयन गर्ने निर्णय भने, यो मोडेल व्यावसायिक वा उपभोक्ता हुन सक्छ भनेर याद महत्त्वपूर्ण छ। पहिलो प्रकार लगातार प्रयोगको लागि अभिप्रेरित छ, यो एक प्रभावशाली मूल्य र Ergonomic डिजाइन छ। घरेलू समकक्षों संग तुलना रूपमा व्यावसायिक भिन्न प्रयोग एक व्यापक क्षेत्र द्वारा विशेषता छन्। घरेलू उपकरण बहुमुखी प्रदान गर्दछ र यसको गुणस्तर र मूल्य को प्रदर्शन मधुर स्वर संयुक्त छन्। यस्तो उपकरण काम गर्न मात्र यो 15-20 मिनेट बाँकी प्रदान गर्न सबै भन्दा राम्रो छ, जबकि, दिन को समयमा4घण्टा हुन सक्छ। घरेलू मोडेल कम शक्ति इन्जिन स्थापित छन्, र प्रयोग सामाग्री सबैभन्दा विश्वसनीय छैनन् भन्ने तथ्यलाई कारण थोरै उपरिकाल। यस्तो अभ्यास कम धूलो र पानी विरुद्ध सुरक्षित छन्। तर, धेरै सुविधाहरू यस्तो उपकरण को सकारात्मक गुणहरू बीच प्रतिष्ठित गर्न सकिन्छ।
किन घरेलू ड्रिल चयन
ड्रिल बश उपभोक्ता वा एक पेशेवर हुन सक्छ। पहिलो प्रकार घरेलू कार्यहरू गर्न डिजाइन गरिएको छ, र लचीलापन यसको मुख्य विशेषताहरु बीच प्रतिष्ठित गर्न सकिन्छ। यो उपकरण एक रूपमा कार्य गर्न सक्छ प्रभाव उपकरण, यो खाडल बनाउन सम्भव छ जो मार्फत र septum मार्फत तोड्न गर्न स्क्रू कस। यस्तो मोडेल अक्सर पर्याप्त जोर reverser संग सुसज्जित छन्।
घरेलू उपकरण हल्का तत्व, जो तिनीहरूलाई कम गंभीर बनाउँछ प्रयोग गरिन्छ। सुविधाजनक आवास clamping लागि उपकरण चक नरम पैड संग सुसज्जित छ। रूप सजिलो सञ्चालन प्रक्रिया को लागि Ergonomic छ। तपाईं बश ड्रिल, घरेलू प्रयोगको लागि निमित्त जो चयन गर्ने निर्णय भने, तपाईं वस्तुतः व्यक्तिगत चोट मास्टर हटाइ, को सुरक्षा शक्ति विशेषताहरु भरोसा गर्न सक्छन्। यस्तो उपकरण एक मामला, एक कारतूस, स्पेयर बिट र ड्रिल बिट सहित घटक संख्या भरिएको छ जसमा आपूर्ति गरिएको छ। घरेलू मोडेल खरीद, तपाईं एक उपकरण, व्यावसायिक विकल्पहरू लागि निर्माता द्वारा प्रदान एक तुलनामा थप हुनेछ जो एक ग्यारेन्टी प्राप्त। एक पासपोर्ट उपकरण7वा बढी घण्टा लगातार काम गर्न सक्षम छ भन्ने संकेत गर्छ भने, त्यसपछि तपाईं बश व्यावसायिक, जो को प्रतिक्रिया मात्र सकारात्मक हुनेछ ड्रिल अघि भनेर थाहा हुनुपर्छ।
विशेष मोडेल को विविधता
तपाईं एक ड्रिल ताररहित प्रभाव बश आवश्यक छ भने, त्यसपछि यसलाई प्रयोग टिकाउ सामाग्री काम गर्न सक्छ। यो उपकरण को माध्यम ले, तपाईं पर्खाल मार्फत तोड्न र धातु सतह ड्रिल गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो मौका उपकरण अक्ष rotates र विशेषता धक्का, पिछडिएको र अगाडि बनाउँछ भन्ने तथ्यलाई द्वारा प्रदान गरिएको छ। तपाईं सतह ड्रिल गर्न आवश्यक के को चुनौती सामना भने, टक्कर साधन समारोह असक्षम गर्न सकिदैन। एक उपकरण जस्तै वायवीय प्रकार को "पिएको" वा असर तत्व को deprived गरिनेछ। यो एक छ भित्र एकाइ को सञ्चालनको सिद्धान्त, एकदम फरक छ दाँतेदार युग्मन, जो जोडिएको अवस्थामा एक "भएभित हुनु" गठन। यो मोडेल को मद्दतले तोड्न गर्न उपकरण जस्तै onslaught सामना छैन किनभने, ठोस वा ईटा को प्रकार मा भारी कुरा, हुन सक्दैन। यस्तो आघात अभ्यास accumulator बश हामी पंचहरु तिनीहरूलाई तुलना गर्नुपर्ने छैन जो काम, भाग लागि उपयुक्त छैनन्। अन्य कुराहरु, प्रभाव सञ्चालन ड्रिलिंग शुद्धता मा एक कमी परिणामस्वरूप, आम मा वृद्धि, साथै एक धुरी backlash समावेश छ। किन लचीलापन सधैं सम्भव सकारात्मक प्रतिक्रिया नाम छ कि छ।
ड्रिल समारोह पेचकस
ड्रिल बश सा.का.नि. ड्रिलिंग र कताई / घुमा स्क्रू, र स्क्रू र स्क्रू को सक्षम छ, जो एक यन्त्र हो। आवश्यक भएमा, फर्नीचर को विधानसभा, यो मोडेल एक उत्कृष्ट समाधान हुनेछ। हो, र यो सानो समस्या सुलझाने मा एक सहायक हुनेछ। तथापि, तपाईं एक टिकाऊ सामाग्री मा एक प्वाल काटन को प्रकार को लागि एक गम्भीर प्रश्न गर्यो अघि भने, यो उपकरण को शक्ति पर्याप्त छैन। अभ्यास जो समीक्षा एकदम राम्रो हो, बश accumulator, को नाडी प्रकार मा मोड परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, फरक गति मा सञ्चालन गर्न सक्षम छ, र घुमा शक्ति परिवर्तन समावेश छ।
ड्रिल कोण प्रकार
अप्रेंटिस र व्यवसायीक यो साँघुरो र तंग रिक्त स्थान मा एक प्वाल ड्रिल गर्न कत्तिको गाह्रो छ थाहा छ। कोणीय मोडेल यी समस्या समाधान गर्न डिजाइन गरिएको छ। को घुमाउँदा सापट को परिणाम लम्ब शरीर को सम्बन्ध मा छ रूपमा, एक कोणीय गियर संग सुसज्जित छ। यस्तो एकाइहरु मा आघात समारोह उपस्थित हुन सक्दैन। शक्ति लागि, यो एकदम सानो छ। त्यसैले, तपाईं बश सा.का.नि. ड्रिल अघि ब्याट्री भने, यो आवश्यक छैन देखि खरीद उपयुक्त नहुन सक्छ निजी प्रयोग आफ्नो तरिका को एक कुना प्राप्त गर्न को लागि हो। केही अवस्थामा यो एक कोण काम को संभावना जो सुझाव विशेष चुच्चो, किन्न बेहतर छ। आवश्यक भएमा यो सामान्य ड्रिल धारण गर्न सकिन्छ।
केही मोडेल wherein मात्रा 10 लिटर भन्दा बढी हुँदैन विभिन्न consistencies, को जनता मिश्रण लागि डिजाइन एक सार्वभौमिक संलग्न छन्। जबकि बन्डल केही सुझावहरू समावेश यो ड्रिल बश 500, प्रत्येक पक्षमा एक ह्यान्डल छ। यस प्रकारका उपकरणहरू धेरै शक्ति छैन, तर यो काम लामो घण्टामा व्यक्त तात्दै बिना फाइदा, छ। तपाईं यस प्रकार को एक अधिक शक्तिशाली एकाइ आवश्यक छ भने, तपाईं जो पूरक उपकरण crowns र ठूलो ड्रिल बिट अनुमति दिन्छ सुरक्षा धेरै डिग्री छ कि एक मोडेल, छनौट गर्नुपर्छ। एक discontinuous प्रकार क्लच को उपस्थिति उपकरण को उच्च सुरक्षा गर्न अनुमति दिन्छ। यो कि उपकरण अड्केको हुन्छ भने, यो व्यक्ति चोट कारण छैन संकेत गर्छ।
Rechargeable ड्रिल को बश को सा.का.नि. 1440 ली ठाउँमा जहाँ नेटवर्क जडान गर्न कुनै संभावना छ प्रयोग गरिएको छ। ध्यान गर्नुपर्छ जो मुख्य सूचक, - ब्याट्री यस प्रकारको। यो निकल-काडमियम प्रजाति आउँदा, तिनीहरूले कम टिकाउ र स्थिर सञ्चालन आवश्यक पर्दछ। तिनीहरूले घरेलू आवश्यकताको प्राप्त सकिँदैन यस कारण लागि हो। आखिर, यो ड्रिल संग कार्य बिना धेरै महिनाको लागि रहन सक्छ। लिथियम-आयन र धातु hydride बैटरी अब सेवा गर्न तयार छन्। यस्तो उपकरणहरू शक्ति उच्च छैन, र तिनीहरूले नरम सामाग्री संग विशेष काम गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ।
सबै भन्दा राम्रो मोडेल को समीक्षा
हथौडा ड्रिल ब्रान्ड gsb 13 रे व्यावसायिक विचार, यो सबै भन्दा यसको वर्ग मा संकुचित छ भन्ने उल्लेख गर्न सकिन्छ। यो चिनाई यसको मदत 600 डब्ल्यू को दायरामा शक्ति खपत 15 मिमी sostalyaet एक व्यास संग एक प्वालपार्नुहोस् गर्न सक्नुहुन्छ। काठ आदर, सक्रिय घटक 25 मिमी बराबर मान वृद्धि भएको छ। अर्को प्रभाव ड्रिल gsb 1300 व्यावसायिक ब्रान्ड मा उपलब्ध छ। यसलाई उच्च दक्षता र विश्वसनीयता द्वारा प्रतिष्ठित छ। नाममात्र शक्ति खपत यो चिनाई मा punched प्वालहरू को व्यास, 13 मिमी छ रूपमा, त्यसपछि 550 डब्ल्यू छ।
तपाईं एक कोणीय ड्रिल चयन गर्ने निर्णय भने, तपाईं ब्रान्ड GWB 10 रे व्यावसायिक, रिक्त स्थान सीमित काम लागि डिजाइन को एक भेद चयन गर्न सक्नुहुन्छ। यसको क्षमता 400 डब्ल्यू छ, तर काठ मा प्वाल को व्यास 10 मिमी छ। तपाईं इस्पात काम गर्न आवश्यक छ भने, यो आंकडा 10 मिमी कम छ।
मोडेलहरू समीक्षा माथि प्रस्तुत
व्यापार समाधान वा घरेलू कार्यहरू लागि ड्रिल प्रदान ब्रान्ड छनौट, तपाईं माथि-वर्णन मोडेल को एक ध्यान गर्नुपर्छ। प्रयोगकर्ता अनुसार, विकल्प पूरै चश्मा पूरा। तिनीहरूले आशा छोटो पतन हुनेछ भनेर डर बिना किन विशेषज्ञहरु यस्तो विकल्प खरीद गर्न सल्लाह छ। आधुनिक उपभोक्ताहरु द्वारा औंल्याए रूपमा, मोडेल पासपोर्ट मा निर्माता द्वारा निर्दिष्ट ती अनुरूप को व्यास जो प्वालहरू, मुक्का गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं बश निर्माता को लिङ्कमा गर्ने हो भने, यो कम्पनी को rechargeable ड्रिल तपाईंलाई ठूलो मद्दत हुन, तर यो शक्ति ध्यान खरीद गर्नुअघि महत्त्वपूर्ण छ गर्नेछ। को साधन को औसत मोटाई 500-900 वाट देखि फरक हुन्छ। तपाईं घर मा कार्यहरू प्रदर्शन गर्न एक थप प्रभावशाली आंकडा चयन हुँदैन। तथापि, तपाईं एकदम अक्सर प्रभावशाली व्यास प्वालहरू ड्रिल गर्न आवश्यक छ भने, तपाईंले एक थप शक्तिशाली उपकरण चयन गर्न, यो तनाव सामना गर्न मदत गर्न मात्र टोक छ। यो शक्ति वृद्धि वजन वृद्धि हुनेछ भनेर सम्झना गर्नुपर्छ। तसर्थ, ड्रिल तपाईं सामान्य कामको लागि चयन गर्न सक्नुहुन्छ, शक्ति जो 700 वाट छ।
तपाईं एक निर्माता ब्रान्ड को बश ड्रिल ब्याट्री पाउन सकिन्छ रुचि भने कहीं तपाईं सान्दर्भिक सामान भण्डारण गर्नुहोस्। तर तपाईं यो पनि माथि उल्लिखित विकल्प विचार गर्न महत्त्वपूर्ण छ खरीद गर्दा। थप प्रभावशाली गति के हुनेछ, को सहज भएको प्वाल पर्खाल पूरा गरेपछि हुनेछ। आखिर, राम्रो गति तपाईं कम शक्ति थप गर्न अनुमति दिन्छ। पलिश वा टक्कर हेरफेर उच्च गति राम्रो सहायक छ। राम्रो जबकि भन्दा बढी छैन कि गर्दैन 500 RPM दर मा स्क्रू कस।
यी विकल्पहरू अन्यथा तपाईंले केही कार्यहरू गर्न पर्याप्त हुन जो सक्छ यी विशेषताहरु, संग एक उपकरण खरिद गर्न सक्नुहुन्छ किनभने, विचार लायक पक्कै हो। यो पनि घरेलू प्रयोगको लागि उपकरणहरू लागू हुन्छ, तिनीहरूले जसको लागि अतिरिक्त पैसा तिर्नुपर्छ कार्यक्षमता हुन सक्छ, खरीद अनुपयुक्त हुनेछ।
लिनोलियम Sinteros - घरेलू उत्पादकहरु ग्यारेन्टी
Chainsaw लागि चुच्चो: koroder, augers, बरफ स्क्रू। वर्णन, निर्देशन
संवहन ब्याट्री: डिजाइन, सुविधाहरू, र बेफाइदा
Cooktops "Hephaestus": वर्णन, प्रकार, समीक्षा
एङ्कर बोल्ट - निर्माण को एक महत्वपूर्ण तत्व
के मोहरा? FACADES को प्रकार
के बढेको गुर्दे श्रोणि यदि
Overalls Reima - एक गुणस्तर फिनिस वस्त्र
धातु "टर्मिनेटर 3": विवरण र समीक्षा
गुण, समीक्षा र वर्णन Sealeks
ब्राजिलियन Wandering माकुरा - रेकर्ड को गिनीज बुक को एक प्रतिनिधि
मर्मत र काठ Windows को बहाली
"एक को आवाज उजाडस्थानमा रो": phraseologism मूल्य, यसको मूल
सरल सामाग्री असामान्य व्यञ्जन
सपना व्याख्या: गर्भवती महिला को जीवनमा परिवर्तन लागि सपना
अन्तरक्रिया - अन्तरक्रिया र संचार को प्रक्रिया मा प्रत्येक अन्य मा एक आपसी व्यक्तिहरूलाई
बिल्ली मा परजीवी: प्रकार, लक्षण, उपचार
होटल Villa डिज्नी3* (मोन्टेनेग्रो, Budva): फोटो र समीक्षा